जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओकाे रिजल्ट आयो, कसरी हेर्ने त ? - Arthasansar
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओकाे रिजल्ट आयो, कसरी हेर्ने त ?
बुधबार, २३ असार २०७८, १६ : १४ मा प्रकाशित
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले निष्कासन गरेकाे साधारण सेयर (आईपीओ) काे नतिजा बल्ल सार्वजनिक भएकाे छ । उक्त आईपीओकाे बाँडफाँड आज (असार २३ गते, बुधबार) निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडकाे कार्यालयमा बिहान ९:३० बजे सम्पन्न भएकाे थियाे । आईपीओ बिहानै बाँडफाँड भएपनि सिस्टममा अपलाेड गर्न समय लाग्ने भएर नतिजा बल्ल सार्वजनिक गरिएकाे हाे ।